ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေး၏ သမီးက ၂၀၂၂ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Marcos Jr နှင့် မဟာမိတ်ပြုခဲ့ကြောင်း အတည်ပြု - Xinhua News Agency
မနီလာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေး(Rodrigo Duterte) ၏ သမီးဖြစ်သူ ဆာရာဒူတာတေးကာပီယို (Sara Duterte-Carpio )သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒုတိယသမ္မတနေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံမည်ဖြစ်ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူမှု၌ ဦးဆောင်နေသည့် သမ္မတလောင်း Ferdinand Marcos Jr. နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က အတည်ပြုခဲ့သည်။Speaking for the first time since filing her candidacy on Saturday, Duterte-Carpio, 43, appealed to Filipinos to back the tandem.
အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒူတာတေးကာပီယို က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို ထောက်ခံပေးကြရန် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများအား ပထမဆုံးအကြိမ်စကားထွက်ပြောစဉ် ပန်ကြားခဲ့သည်။
စိန်ခေါ်မှုများကြားတွင် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသည်အထိ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများက ၎င်းတို့အား ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း Facebook တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ဒူတာတေးကာပီယို က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူများ၏ တခဲနက်အားပေးမှုက ၎င်းအား အင်အားဖြစ်စေကြောင်း ဆိုသည်။
သမ္မတဟောင်း ဖာဒီနန်မားကို့စ်၏ တစ်ဦးတည်းသောသား အသက် ၆၄ နှစ်ရှိ Marcos Jr က၎င်းတို့၏ မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကို သီးခြားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် Davao မြို့၊ မြို့တော်ဝန် ဆာရာဒူတာတေးကာပီယို က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် စာရင်းသွင်းပြီးနောက် မကြာမီမှာပင် မားကို့စ်ပါတီက ဒူတာတေးကာပီယို ကို မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။
Ferdinand Marcos Jr. နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် သူမ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို လမ်းလွဲစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ဒူတာတေးကာပီယိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သမ္မတ ဒူတာတေး ရဲ့ အစပြုလုပ်ဆောင်မှုများအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရုံတင်မကဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ပိုမို မြှင့်တင်ဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတ ကို သီးခြားစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် လက်ရှိသမ္မတ ဒူတာတေး ၏သမီး ဖြစ်သူ ဆာရာဒူတာတေးကာပီယို က ဒုတိယသမ္မတ အရွေးခံရန် လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်၊ ဒူတာတေး ၏ သက်တမ်းကြာလက်ထောက် တစ်ဦးဖြစ်သူ လွှတ်တော်အမတ် Christopher Go သည် သမ္မတနှင့်အတူ မနီလာရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ၎င်း၏လျှောက်လွှာကို ပြောင်းလဲ၍ သမ္မတလောင်းရွေးပွဲအတွက် တင်သွင်းကာ ဒုတိယသမ္မတနေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် လျှောက်ထားမှုမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
သမ္မတလောင်းနေရာအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှု နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒူတာတေးသည် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ဒူတာတေးသည် နိုင်ငံရေးမှ အနားယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် “ပြည်သူဆန္ဒကို နာခံခြင်း” ဖြင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အောက်တိုဘာလတွင် ကြေညာခဲ့သေးသည်။
ဒူတာတေးသည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီး ၎င်း၏သက်တမ်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတများကို ခြောက်နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ၉ ရက်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Philippine President Duterte’s daughter confirms alliance with Marcos Jr. in 2022 elections
MANILA, Nov. 16 (Xinhua) — Sara Duterte-Carpio, daughter of Philippine President Rodrigo Duterte and who is running for the vice presidency in the 2022 elections, confirmed Tuesday her alliance with presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. who is now leading the poll.
Speaking for the first time since filing her candidacy on Saturday, Duterte-Carpio, 43, appealed to Filipinos to back the tandem.
Inavideo post on Facebook, Duterte-Carpio said she is confident that Filipinos will help and support them until the elections are won amid the challenges.
She said the overwhelming support of the people is making her strong.
Marcos, 64, the only son of former President Ferdinand Marcos, confirmed their alliance inaseparate statement. Marcos’ party adopted Duterte-Carpio shortly after the Davao City mayor registered her candidacy on Saturday.
Duterte-Carpio said her decision to ally with Ferdinand Marcos Jr. was not meant to derail the candidacy of other aspirants.
“Our objective is not only to pursue the initiatives of President Duterte but to enhance the administration’s programs further,” she said, calling for unity.
Under the Philippine law, the president and vice president are elected separately.
Right after the presidential daughter’s filing last Saturday, Duterte’s longtime aide-turned-senator Christopher Go went to Commission on Elections office in Manila with the president to change his application, submitting his certificate of candidacy for president and withdrawing that for vice president.
On Monday which is the last day for making candidate substitutions, Duterte, 76, filed his certificate of candidacy for senator in the coming elections.
He announced last month that he was retiring from politics and would not run in the next elections “in obedience to the will of the people.”
Duterte was elected as the president of the Philippines in 2016, and his term ends on June 30, 2022. The constitution limits Philippine presidents toasingle six-year term. The next elections are scheduled to be held on May 9, 2022. Enditem
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအစိုးရက Sinovac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း တံခါးဖွင့်အစီအမံ ထုတ်ဖော်ပြသ